မြန်မာ့နွေဦး အတာသင်္ကြန်နေ့လေးမှာ ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေကို ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ပိုးကြာဖြူခင် – Youth Bar
မြန်မာ့နွေဦး အတာသင်္ကြန်နေ့လေးမှာ ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေကို ပေးဝေလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်
ဆိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပရိသတ်အချစ်တွေ အခိုင်အမာရရှိကာ တစ်ခဲနက်အောင်မြင်မှုတွေ များစွာရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချော ပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ လတ်တလော အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရပ်တည်နေသူပါပဲ..။
ပြည်သူတွေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးပိုးကြာဖြူခင်ကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း ပြည်သူတွေ အတွက် စားနပ်ရိက္ခာတွေ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး နှစ်သစ်ကူး အချိန်အခါကို စတင်ဖြတ်သန်းကာ ကုသိုလ်ယူခဲ့ပြန်ပါတယ်..။
မြန်မာ့နွေဦးသင်္ကြန်အကြိုနေ့အမှီ အလှူအဖြစ် ဆန်၊ ဆီနဲ့ အခြားစားသောက်ကုန်တွေကို ပြည်သူတွေ အတွက်လှူဒါန်းကာ မွန်မွန်မြတ်မြတ် ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ပိုးကြာဖြူခင်က ပရိသတ်တွေကိုလည်း အသိပေးဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
“မြန်မာ့နွေဦးသင်္ကြန်အကြိုနေ့အမှီ မွန်မြတ်သော အလှူဒါန အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါသည်.. ပါဝင်လှူဒါန်းပေးပါသော မိတ်ဆွေ ရောင်းရင်းများ,အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ စာအုပ်ချစ်သူပရိတ်သတ်များနှင့် Poe Kyar Phyu Khin fans များ အားလုံး အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.
.” ဆိုကာ အလှူပုံရိပ်တွေကို ဝေမျှထားတာပါ..။
သင်္ကြန်အကြိုနေ့မှာပဲ ပြည်သူတွေနဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ပြုလုပ်ရင်း ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ ပိုးကြာဖြူခင်တို့မိသားစုရဲ့ အလှူပုံရိပ်တွေကိုလည်း အားလုံးက သာဓုခေါ်ကာ ဆုတောင်းပေးထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ျမန္မာ့ေႏြဦး အတာသၾကၤန္ေန႕ေလးမွာ ျပည္သူေတြအတြက္ စားေသာက္ကုန္ေတြကို ေပးေဝလႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ပိုးၾကာျဖဴခင္
ဆိုင္းမိုင္ဆိုတဲ့ ဇာတ္႐ုပ္နဲ႕ ပရိသတ္အခ်စ္ေတြ အခိုင္အမာရရွိကာ တစ္ခဲနက္ေအာင္ျမင္မႈေတြ မ်ားစြာရရွိထားတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသမီးေခ်ာ ပိုးၾကာျဖဴခင္ကေတာ့ လတ္တေလာ အေျခအေနေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ ရပ္တည္ေနသူပါပဲ..။
ျပည္သူေတြအတြက္ တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန ပါဝင္အားျဖည့္ခဲ့တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးပိုးၾကာျဖဴခင္ကေတာ့ ဒီကေန႕မွာလည္း ျပည္သူေတြ အတြက္ စားနပ္ရိကၡာေတြ လႉဒါန္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္အခါကို စတင္ျဖတ္သန္းကာ ကုသိုလ္ယူခဲ့ျပန္ပါတယ္..။
ျမန္မာ့ေႏြဦးသၾကၤန္အႀကိဳေန႕အမွီ အလႉအျဖစ္ ဆန္၊ ဆီနဲ႕ အျခားစားေသာက္ကုန္ေတြကို ျပည္သူေတြ အတြက္လႉဒါန္းကာ မြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ ကုသိုလ္ယူခဲ့တဲ့ ပုံရိပ္ေတြကိုလည္း ပိုးၾကာျဖဴခင္က ပရိသတ္ေတြကိုလည္း အသိေပးေဝမွ်ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။
“ျမန္မာ့ေႏြဦးသၾကၤန္အႀကိဳေန႕အမွီ မြန္ျမတ္ေသာ အလႉဒါန အတြက္ဝမ္းသာပီတိျဖစ္မိပါသည္.. ပါဝင္လႉဒါန္းေပးပါေသာ မိတ္ေဆြ ေရာင္းရင္းမ်ား,အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ စာအုပ္ခ်စ္သူပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ Poe Kyar Phyu Khin fans မ်ား အားလုံး အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္.
.” ဆိုကာ အလႉပုံရိပ္ေတြကို ေဝမွ်ထားတာပါ..။
သၾကၤန္အႀကိဳေန႕မွာပဲ ျပည္သူေတြနဲ႕ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ ျပဳလုပ္ရင္း ျဖတ္သန္းေနၾကတဲ့ ပိုးၾကာျဖဴခင္တို႔မိသားစုရဲ႕ အလႉပုံရိပ္ေတြကိုလည္း အားလုံးက သာဓုေခၚကာ ဆုေတာင္းေပးထားၾကတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္..။
သွေးမအေးသွားဘဲ လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ ဟန်နီနွေဦးတို့လူငယ်တစ်စု
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့အတူတူရှိမနေနိုင်ပေမယ့် နှစ်သစ်ဆုမွန်ကောင်းတွေနဲ့ အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ကြဖို့ပြောလာတဲ့ Rဇာနည်